Otu esi etinye MySQL 8.0 na Rocky Linux 8 - LinuxCapable
Wednesday, December 1, 2021 by Jọshụa James
Nhọrọ 1. Wụnye MySQL 8.0 na AppStream
Nhọrọ 2. Wụnye MySQL 8.0 Community Edition (Kacha ọhụrụ)
Lelee ọnọdụ nkesa MySQL 8
Otu esi ewepu (wepu) MySQL 8
MySQL bụ usoro njikwa nchekwa data mmekọrịta dabere na SQL (Asụsụ Ajụjụ Haziri). Ọ bụ otu n'ime ngwanrọ nchekwa data a na-ejikarị maka ọtụtụ ngwa ama ama nke na-eji ya. A na-eji MySQL maka nkwakọba data, e-azụmahịa, na ngwa ntinye akwụkwọ, mana njirimara ya kacha eji bụ nchekwa na nchekwa data webụ.
Rocky Linux na-abịa na MySQL na ebe nchekwa ya. Agbanyeghị, dị ka ọtụtụ ndị maara, ọ bụghị ntọhapụ ọhụrụ. N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi etinye MySQL 8.0 site na iji AppStream ma ọ bụ ụdị RPM kacha ọhụrụ sitere na ebe nchekwa MySQL na Rocky Linux 8.
Site na ndabara, MySQL 8.0 dị ka nhọrọ ndabara na Rocky Linux na ọ dị ọhụrụ. Mbụ, nyochaa ma ọ bụrụ na ụdị ọ bụla ọzọ dị na iwu na-esonụ.
Ugbu a, n'oge nkuzi a, naanị MySQL 8.0 dị ma bụrụ ndabara egosiri na ya [d] ọkọlọtọ.
Site n'oge ụfọdụ, ịmebeghị MySQL 8, jiri iwu na-esonụ.
Gaa n'ihu na nwụnye site na iji iwu ọnụ na-esonụ.
Tinyegharịa iwu nrụnye ka ịmalite ọzọ.
Ozugbo echichi a dechara, nyochaa nwụnye na-eji –ụdị iwu.
Na-esote, mee ka MySQL 8 jiri iwu na-esonụ.
Iwu a dị n'elu ga-eme ka MySQL rụọ ọrụ na nnọkọ gị ugbu a, na na usoro n'ọdịnihu, malitegharịa na-akpaghị aka.
Maka ndị ọrụ chọrọ MySQL 8.0 kachasị ọhụrụ ma ọ bụ, maka nke ahụ, ụdị ọ bụla ọzọ, iji usoro ndị a n'okpuru ga-enweta nke a.
Mara, n'oge nkuzi a, ọdịiche dị n'etiti AppStream na nke kachasị ọhụrụ sitere na MySQL RPM dị obere. Maka ọtụtụ, AppStream ga-adị mma karịa.
Mbụ, jiri iwu na-esonụ bubata MySQL 8 Community RPM.
Na-esote, chọpụta na agbakwunyere ebe nchekwa ahụ nke ọma site na ibipụta ya na dnf repolist.
Ọzọ, wụnye MySQL 8.0 Community Server. Iwu na-esote ga-ewepụ ụdị Stream Stream wee mee ka mbipụta obodo nwee ike.
Mara, a ga-ajụ gị mbubata igodo GPG, Ụdị Y, iji mezue nwụnye.
Na-esote, kwado ụdị nrụpụta ahụ, nke ga-achọpụtakwa ọganiihu nke nrụnye ahụ.
Ịtọ ntọala paswọọdụ ike maka akaụntụ.
Mara, ị na-eji (NA) iji wepụ ihe niile. Ọzọkwa, ọ bụrụ na-amasị gị, ị nwere ike ịtọgharịa mgbọrọgwụ okwuntughe gị site na ịmepụta nke ọhụrụ; ị nwere ike ịgafe nke a ma ọ bụrụ na ịchọrọ, dịka ị debere ya n'oge ntinye mbụ na windo mmapụta.
Ụdị Y, wee pịa Tinye igodo ka ịga n'ihu na iwepụ ya.
Maka ndị ọrụ tinyegoro mbipụta obodo MySQL 8, jiri iwu a.
N'ime nkuzi, ị mụtala otu esi etinye MySQL 8 ọhụrụ na Rocky Linux 8. Tụkwasị na nke a, yana nhọrọ iji kwalite maka ọrụ ọrụ kpọmkwem na ngwaike dị iche iche site na ịdepụta eriri onye ọrụ na CPUs, ịkpọ aha ole na ole n'ime atụmatụ ọhụrụ.
N'ozuzu, MySQL 8 nwere arụmọrụ ka mma maka ịgụ akwụkwọ / dee oke ọrụ, ọrụ IO na-arụ ọrụ, na nnukwu ọrụ esemokwu. Ndị ọrụ na ụdị MySQL ochie kwesịrị ịtụle ịkwalite, n'ihi na uru arụmọrụ bara ya.
Otu esi etinye MySQL 8 kacha ọhụrụ na Ubuntu 20.04
Otu esi etinye MySQL 8.0 na AlmaLinux 8
Otu esi etinye MySQL 8.0 na openSUSE Leap 15
Otu esi etinye MySQL 8.0 na CentOS 8 Stream
Otu esi etinye MySQL 8.0 na Fedora 35
Categories Nkume linux Tags MySQL, Nkume Linux 8 Mail igodo